“ရွှေမြန်မာ”: January 2010
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 29, 20103comments:
*** လူတစ်ယောက်ကို ကံကောင်းစေတဲ့စိတ်ဆိုတာ စိတ်ကို ကောင်းအောင်
*** မိမိအရည်အချင်းကို အသုံးမပြုဘဲ ထားချင်သောစိတ်သည် အပြင်ရန်သူထက် ပို၍
*** သင်လိုချင်သော်လည်း အလွယ်တကူမရနိုင်သည်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်၏။
သင်မလိုချင်သော်လည်း အလွယ်တကူရနိုင်သောအရာမှာ ၀မ်းနည်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
*** အနာဂတ်ကာလ၏ လျောက်ရမယ့်လမ်းကို အကောင်းဆုံးထုဆစ်ပေးနိုင်သူမှာ
အတိတ်ဘ၀၌ ကျန်ခဲ့သော မှားယွင်းမှုများပင် ဖြစ်သည်။
***ပျားရည်လို ချိုမြိန်သော အချစ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်လို လှပသောဘ၀
ထိုနှစ်ခုကို ဆုံစည်းဖို့ နှလုံးသားကို လမ်းခင်းပေးပါ။
****ကံကောင်းချင်သူများကတော့ သူတို့ ရွေးချယ်ထားသောအလုပ်ကို တစ်ဆင့်ပြီး
တစ်ဆင့် ကောင်းအောင် လုပ်ကြတယ်။ ကံမကောင်းသူများကတော့
အလုပ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲလေ့ရှိကြသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, January 27, 2010 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, January 24, 20105comments:
အကြောင်းအရာက: နည်းပညာ, ဗဟုသုတ, မျှဝေခြင်း
Pre-Barcamp Yangon is now holding at room 201 Main Building (Myanmar Info Tech).
ဒီနေ့ ကျောင်းမသွားခင် အတန်းကို ခွင့်တိုင်ပြီး Barcamp ပွဲကို ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မောင်နှမတွေကို အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်လည်တွေ့ရတော့ အရင် ဘလောက်ဂါဒေးသွားတုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ပြန်လည်သတိရ လွမ်းဆွတ်မိသလို ခံစားရတယ်။
အမြဲတမ်းသာ ဒီလို နေသွားကြရင် ပိုကောင်းမယ်နော်။ ဒီနေ့ လူတော်တော်လာတာလည်း တွေ့ရတဲ့အတွက် တော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ ပြောချင်တဲ့သူတွေကလည်း များသလို နားထောင်ချင်တဲ့သူတွေကလည်း အရမ်းများတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းရှိလို့ ပြန်လစ်ရတော့ နားမထောင်လိုက်ရတဲ့အတွက် တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ မောင်နှမတွေ စုံစုံညီညီတွေ့ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း မြန်မာပြည်မှာ Barcamp ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲနော်။ ခုပြန်လာတော့ သတင်းကြားရတယ် သိပ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး နှုတ်ဆက်ဖို့ မ၀ံ့ရဲကြဘူးတဲ့။ ကိုညီလင်းဆက်ပြောတာက နွေးထွေးစွာ နှုတ်ဆက်ကြဖို့ပြောတာ ကြားရတယ်တဲ့။ တချို့က စိမ်းနေလို့နေမှာပေါ့လို့ ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။ အမတို့ကျတော့ ရယ်ရယ်မောမောပဲတဲ့။ လူတော်တော်များများက မသိရင် မိတ်ဆက်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ သူ သိချင်တာက ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကို သိချင်တာတဲ့ ပြောတဲ့သူ မရှိဘူးဆိုလားပဲ လာပြောတယ်။ မနက်ဖြန်တော့ ရှိချင်ရှိမှာပေါ့လို့ ပြောမယ့်သူမရှိရင် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လက်တွဲပြီးသိတာတွေ မျှမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ Barcamp ဆိုတာ ဘာလဲလို့ သဘောပေါက်သွားကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ စပွန်ဆာတွေလည်း နောင်လာမယ့်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း အမြဲပေါ်ပေါက်နိုင်ပါစေလို့ ပြောရင်းနဲ့ ဒီနေ့ Barcamp ကို ကြိုဆိုလိုက်မိပါတော့တယ်။
ကဲ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပြောကြလဲ......
နော့ဘက်ဒ် ကမ္ဘောဒီးယားမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရ၀က်ဒ် လိပ်စာနှင့် ယူနီကုဒ်အကြောင်းပြောနေစဉ်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, January 23, 2010 No comments:
အကြောင်းအရာက: နည်းပညာ, အမှတ်တရ
writingapoem in dream
the poem i write leaves no mark
deep in the warm night i dream the dream
in each dream i writeapoem
the poem i write i do not voice
foramoment i greet the poem
for that moment i smile with joy
when i awake i recall
the old incidentof the night
and with that thought i retain the joy
အိပ်မက်ထဲမှာ ၊ ကဗျာရေးသော
ရေးသောကဗျာ ၊ အရာမထင်
တစ်ခါမက်လျှင် ၊ တစ်ပုဒ်ဆင်၍
ဆင်သောတစ်ပုဒ် ၊ ကွယ်၍ မြုပ်၍
နုတ်နှင့် မဟ ၊ ဖော်မပြလည်း
ဆီးရကြိုရ ၊ တစ်ဒင်္ဂသည်
ပြုံးရပျော်ရ ၊ တစ်ခဏသည်
ညကဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြန်၍ ပြောင်း၍
ကျွန်မအတွက် သူငယ်ချင်းက တစ်ဝက်စပ်ပေးသောကဗျာ ဆက်ပြီး စပ်ကြည့်လိုက်တာပါ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, January 21, 2010 1 comment:
Seminar Title : "Software Testing"
Date and Time : ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် (သောကြာနေ့) နေ့လည်
၁းဝဝ နာရီမှ ၂း၃ဝ အထိ၊
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ
(၂၂) ရက် (သောကြာနေ့) နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၂း၃ဝ အထိ၊ ရန်ကုန်မြို့၊
လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂ဝ၅) တွင် UK ရှိ Nokia
ကုမ္ပဏီမှ Senior Test Analyst ဖြစ်သူ Mr.Len Aye မှ "Software Testing"
ပြုလုပ်သည့် နည်းစနစ်များ ဖြစ်သည့် "Testing Tools, Test case
generation, error management, test case management, test Reporting"
အစရှိသည်တို့ နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ဟောပြောပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲသို့ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန်
မလိုဘဲ အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင်အဆိုပါနေ့ရက်တွင် နေ့လည် ၃းဝဝ နာရီမှ ၄း၃ဝ နာရီအထိ "Techniques
for Testing Practioners" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် "Hands-on Workshop"
တစ်ခုကို ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ "Hands-on Workshop"
သို့ တက်ရောက်လိုသူများသည် MCPA ရုံးခန်း၌
ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ ထိုစာရင်းပေးသွင်း သူများထဲမှ
သင့်တော်သူ အယောက် (၅ဝ) ကို MCPA မှ ရွေးချယ်ပြီး အခမဲ့တက်ရောက်
အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
source : mcpa
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, January 21, 2010 No comments:
ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီန၀န်းကျင်တွင် နေကြက်နေပုံကို ရန်ကုမြို့မှ မြင်ရသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 15, 2010 1 comment:
၁၈၇၆ ခုနှစ်က ရန်ကုန် - ပြည် ရထားလမ်း၌ ဘူတာရုံ(၁၈) ခု တည်ဆောက်ခဲ့ရာ
ရန်ကုန်ဘူတာကြီး ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကို သစ်သား၊
သွပ်ပြားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကို ရှေးဦးစွာ
မီးရထားရုံတော်ဟု ခေါ်ခဲ့ပြီး ဖယ်ရာလမ်း (ယခုပန်းဆိုးတန်းလမ်း) ထိပ်တွင်
တည်ရှိသောကြောင့် ဖယ်ရာလမ်းစခန်းဟု ခေါ်သည်။
ကွမ်းခြံအများအပြားရှိခဲ့သောကြောင့် ကွမ်းခြံဘူတာကြီးဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
(မီးရထားလမ်းဖွင့်စက ဘူတာရုံများကို "စခန်း"ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။)
၁၈၇၆ ခုနှစ်က ပထမဆုံး ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်ဘူတာကြီးသည် ၁၉၁၀
ပြည့်နှစ်သို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသို့
ဘုံဘေမြို့အစိုးရ ဗိသုကာ အကြံပေးအရာရှိဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မစ္ဇတာဝီလ်ကော့အား
ပုံစံတွင် မီးရထားဝင်းအကျယ်သည် စတုရန်းပေ (၁၀၀၀၀၀) တစ်သိန်းရှိပြီး
အဆောက်အအုံအတွက် စတုရန်းပေ (၆၈၄၀၀) ကို သုံးသည်။ ၎င်းအနက်စတုရန်းပေ (၄၀၅၀၀)
မှ ပင်မဘူတာရုံကြီးဖြစ်သည်။ ယင်းဘူတာရုံသစ်ကြီးကို ၁၉၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄
ရက်နေ့တွင် ဒုတိယဘုရင်ခံ ဆာဟင်နရီအဒယ်ဆင်က ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
ဘူတာရုံကြီးတောင်ဘက်တွင် မစ္ဇတာဝီလ်ကော့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်
ယင်းဘူတာရုံကြီးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းက မကြာခဏ
ဗုံးကြဲခြင်းခံခဲ့ရသဖြင့် နေရာအနှံ့အပြားသည် ဗုံးဒဏ်ကြောင့်
မရှုမလှပျက်စီးခဲ့ရာ ဆင်းမလားအစိုးရက စစ်ပြီးပါက ဘူတာရုံအသစ်တစ်ခု
တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သဖြင့် ၁၉၄၆ ခုနှစ်က တင်ပြခဲ့သော
ပုံစံကို မကြိုက်သဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ရန်ကုန်နေပြည်တော်
အင်ဂျင်နီယာဦးလှသွင်ရေးဆွဲသော ပုံစံသစ်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့၌
မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်
အုတ်မြစ်ချ စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
ယခုဘူတာရုံသစ်သည် ယခင်အဟောင်းထက် စတုရန်းပေ (၁၄၅၀၀) ပိုမိုကျယ်ဝန်းပေသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ စနေနေ့နံနက် ၅ နာရီ, သံဃာတော် (၂၇) ပါး အား
ဆွမ်းကပ်ပြီး ၈ နာရီတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, January 10, 2010 1 comment:
အကြောင်းအရာက: Website index, နည်းပညာ, သတင်း
သင့်ရဲ့ Web page ထဲမှာ ဘောင်တွေခတ်တာ လုပ်ကြည့်ကြရအောင်
Table တစ်ခုကို row တွေ၊ cell တွေကို ဘောင်ခတ်ပြီး
ဒီအတွက် <table>tags border attribute ကို သုံးရပါမယ်။ Table တစ်ခု
တည်ဆောက်တဲ့အခါ ဘေးဘောင်တွေရဲ့ အထူအပါး ပမာဏကို ဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့
တန်ဖိုးကိုတော့ ထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ default value ကို သုည (0) ပဲ
ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးဘောင်တွေ ပါလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Border attribute ကို မသုံးဘဲနဲ့ table တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး
ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ CSS ကို သုံးရပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ table
တစ်ခုကို Border attribute အသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာ
ကော်လံ ၃ ခုယူမယ်ဆိုရင်
<title> Welcome to Goldenmyanmar</title>
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ကော်လံ သုံးခုပုံစံနဲ့
လအလိုက်ကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြင် ဇယားကွက်ကလေးတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 08, 2010 1 comment:
23.01.2010 - 24.01.2010 09:00 - 17:00
Conference Hall, Myanmar Info-Tech ပင်မဆောင် -
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, January 07, 2010 No comments:
BarCamp ဆိုတာ သီးသန့်နာမည် တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ad-hoc gathering, open
environment, intense event လို့ သိကြပါတယ်။ BarCamp ကို နိုင်ငံတကာမှာ
ပြုလုပ်ကြပြီးတော့ မြို့နာမည်နဲ့တွဲပြီးသာ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ BarCamp
ရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ် အဲဒါတွေကတော့ -
1. ~ Open And Free
2. ~ No Spectators, Only Participants
3. ~ No pre-scheduled presentations
4. ~ Free to choose which presentations to see
5. ~ Live update
This is BarCamp!! =D
BarCamp တွေ အောင်မြင်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းကတော့ ပုံမှန် conference
သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ် ၀ါသနာပါရာ အစုအဖွဲ့တွေလိုက်
ဆွေးနွေးနိုင်ကြပြီး speakers, listeners ရယ်လို့ ခွဲခြားထားတာမျိုး
What can People do at the BarCamp?
BarCamp မှာ ဘာတွေလုပ်လို့ ရနိုင်သလဲဆိုရင် camping ထွက်သလို
သဘောမျိုးပါပဲ အားလုံးက မသိတာတွေကို သိတာတွေကို share လုပ်ကြမယ်။
အချင်းချင်းဆီကနေ မသိတာတွေ သင်ယူကြမယ်၊ ဆွေးနွေးကြမယ်။ Demonstration
တွေလုပ်ပြကြမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် tools တွေ ဖလှယ်ကြပါမယ်။ နောက်
အားလုံးစုပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး အားလက်ရက်မှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်သလို
BarCamp မှာ ပါဝင်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲဆိုရင် ပထမဆုံး လိုအပ်တာက အားလုံးနဲ့
အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်၊ BarCampers တွေ အချင်းချင်း
ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေ ရှိလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Optional အနေနဲ့ online ကနေ
register လုပ်ဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ Register မလုပ်လဲ လာလို့ရပါတယ်၊
ပူးပေါင်းပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်.. register လုပ်ရတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်က ပွဲနေ့တွေမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပေးဖို့အစီအစဉ်တွက်သာ
BarCampers တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့
အပေါင်းအသင်းတွေ တိုးလာဖို့ရည်ရွယ်ထားရပါမယ်။ နောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေကတော့
twitter လို microblogging, instant texting အကောင့်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ဘာလို့လဲဆိုရင် ပွဲနေ့မှာ BarCampers တွေ အကျီမှာ ကိုယ့်ရဲ့ twitter
account ကို sticker နဲ့ ကပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး BarCamper အချင်းချင်း
မြင်ရုံနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ပွဲနေ့မှာ
BarCampers တွေ အားလုံး update လုပ်သမျှ twitter messages တွေ အားလုံးကို
Projector နဲ့ BarCamp Yangon web site မှာ live တင်ပေးနေမှာ မို့ပါပဲ။
BarCamper အနေနဲ့ ပွဲနေမှာ laptop, PDA, SmartPhone, HandPhone, External
Hard Disk, Memory Stick တွေ ရှိရင်ယူခဲ့ဖို့ကိုလဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ပွဲနေ့တွေမှာ Campus Area တစ်ခုလုံးကို Wifi free ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး
BarCampers တွေ အချင်းချင်း Softwares, SDK, IDE, eBook တွေ share
လုပ်ကြမယ့် file server တွေလဲ ထားပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဖြစ်နိုင်ရင်
power source အတွက် extension cable မျိုးတွေ ပါလာရင်တော့
BarCamp Around The World
BarCamp ကို အခုလက်ရှိ အချိန်ထိ နိုင်ငံတကာက မြို့တွေ အသီးသီးမှာ
အကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့
မြို့ပေါင်းက ၃၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ အခု အဲဒီ မြို့တွေထဲမှာ တစ်ခု အပါအ၀င်
ဖြစ်လာမယ့် BarCamp Yangon ကို 2010 ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ပြုလုပ်တော့မှာ
ဖြစ်လို့ အားလုံးကို ပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ အခြား BarCamp နဲ့
ပက်သက်ပြီး သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အကြံပြုလိုတာတွေ ရှိခဲ့ရင်
ကျွန်တော်ဆီကို email ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ကတော့ BarCamp ရဲ့ လက်သုံးစကားလေးနဲ့ အားလုံးကို
ဖိတ်ခေါ်ရင်း BarCamp Yangon ကို ကြိုဆိုပါရစေ။
BarCamp History on Wikipedia
Official BarCamp Yangon .org (Under Construction)
BarCamp Yangon on Twitter
* MPT Need To Respect Users
* Keynotes from Apple WWDC 09
* Microsoft Zune New Video Ad
* Myamar ICT Exhibition May 2009
* Myanmar Weather and Natural Disaster Information
* The App Store is about to hit 1 Billion Download
* Storm in Bay Of Bangle
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, January 06, 2010 No comments:
တစ်ခါ ဆောင်းရာသီကို ရောက်လာပြန်ပေါ့
တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါသာ ပွင့်တဲ့
ဆောင်းအကူးကို ငါ ကြိုဆို
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, January 05, 20102comments:
Windows7က လှပတဲ့ Function အချို့ကို Windows Vista နဲ့ XP မှာ အသုံးချကြည့်ရအောင်
Windows7ထွက်လာကတည်းက များလိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေ၊
ကြော်ငြာအားကောင်းသလို တကယ်လည်း အသစ်တွေပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထူးခြားမှုက
အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကို Windows Vista နဲ့ Windows XP မှာ
သုံးနိုင်အောင် ဆော့ဖ်ဝဲပြန်ထုတ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Aero Shake သည် desktop မှာ ရှိနေတဲ့ ဖွင့်သုံးနေသော Window များကို
မောက်စ်ရဲ့ မြားဦးတင်ပြီး ဘယ်ညာဆွဲယူလှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် Tool bar (Title
bar) သို့ minimize လုပ်ပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Vista နဲ့ XP
မှာလို Display အပေါ် ညာဘက်ထောင့်က Minimize ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Window
တစ်ခုချင်း လုပ်စရာမလိုပါ။ ၄င်း minimize လုပ်ထားတဲ့ Window များကိုလည်း
မောက်စ်ကို ဘယ်ညာယမ်းပြီး လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် desktop မှာ
ပြန်ပေါ်စေပါတယ်။ ၄င်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို Windows Vista နဲ့ XP မှာ
၀က်ဘ်ဆိုက်ကတစ်ဆင့် Aero_Shake_1.3 ဖိုင်ကို download ချ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်အရွယ်အစား 202KB သာ ရှိပါတယ်။
Aero Snap သည် Desktop မှာ မိမိဖွင့်သုံးနေတဲ့ Window မြင်ကွင်းနှစ်ခု
သို့မဟုတ် Window များကို မြင်ကွင်းမှာ တစ်ဝက်စီ သို့မဟုတ် မျှမျှတတ
ကြည့်လို့ရအောင် စီပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းအတွက် Windows 7
မှာ Windows Logo ကီးကို နှိပ်ထားပြီး arrow key များကို
တွဲသုံးခြင်းဖြင့် မြင်ကွင်းမှာ အဆင်ပြေအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
Windows Vista နဲ့ XP မှာတော့ Window မြင်ကွင်းတစ်ခုချင်းကို မောက်စ်နဲ့
drag ဆွဲပြီး ရွှေ့ပြောင်းရပါတယ်။ ယခု Windows7က Areo Snap
လုပ်ဆောင်ချက်ကို Windows Vista နဲ့ XP မှာ သုံးချင်ရင်
http://www.aerosnap.de/eng/download.htm ၀က်ဘ်ဆိုက်ကနေ Areo-snap_0_61
ဖိုင်ကို download ချ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်အရွယ်အစား 925KB သာ ရှိပါတယ်။
ကဲ ကျန်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကို နောက်မှ အလျဉ်းသင့်သလို တင်ပြပေးပါမယ်နော်။
ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေ စုံလင်စွာ ပါရှိတဲ့ စာအုပ်ကတော့
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, January 04, 20102comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, January 01, 20102comments: